Usesayine kwelePSL uSteven Pienaar | News24
Usesayine kwelePSL uSteven Pienaar
Johhanesburg – Lowo owayengukaputeni weBafana Bafana, uSteven Pienaar, usesayine nompetha be-Absa Premiership, uBidvest Wits.
IWits imemezele lezi zindaba kuTwitter, yathi: “AmaClever Boys ajabule ukwamukela uSteven Pienaar emndenini.”
Le nkakha yomdlali ijoyina labo mpetha be-PSL kanye neMTN8 nje ibisivele ingenankontileka naqembu selokhu yashiya iSunderland ngokuphela kwesizini.
OLUNYE UDABA:UMessi uzokwenza esinye isivumelwano neBarcelona
UPienaar, nowaqala ukudlala ibhola kwi-Ajax Cape Town ngaphambi kokuba ayodlala phesheya kwi-Ajax Amsterdam ngo-2001, kukholakala ukuthi ubehalelwa amaqembu ahlekene kwiPSL, nokubalwa phakathi kwawo iCape Town City, iKaizer Chiefs, iMamelodi Sundowns kanye ne-Orlando Pirates.
Lo mdlali oneminyaka engu-16 ubudala usechithe iminyaka engu-16 yokudlala kwakhe ibhola edlala e-Europe – nalapho iminyaka eyishumi eyichithe edlala eNgilandi nalapho ayedlalela khona i-Everton kanye neTottenham Hotspur.
IziTshudeni bezisanda kusayina uDaylon Claasen ngaphambi kokuba ziqale umkhankaso wokuvikela isicoco sazo ngesizini entsha ka-2017/18.